डा. केसी इलाममाः अनसन कहिलेबाट ? (ट्वीटसहित) « Janata Samachar
डा. केसी इलाममाः अनसन कहिलेबाट ? (ट्वीटसहित)
प्रकाशित मिति : 1 January, 2019 6:23 pm
काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आउनु भएका डा. गोविन्द केसी १६ औं अनसन बस्न इलाम पुग्नुभएको छ । सरकारलाई मंगलबारसम्म आफ्ना माग पुरा गर्न अल्टिमेटम दिनुभएका केसी माग पुरा हुने छाँट नदेखेपछि इलाम जानुभएको हो । उहाँले बुधबारबाट अनसन बस्ने तयारी गर्नुभएको छ ।
उहाँको १६ औं अनसनमा सरकारसँग ३ बुँदे माग रहेका छन् । पहिलो बुँदामा उहाँले १५ औं सत्याग्रहका क्रममा गत साउन १० गते सरकारसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको माग गर्नुभएको छ । सातै प्रदेशमा मेडिकल कलेज खोल्ने काम अघि बढाउन, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको भर्ना अविलम्ब खोल्न पनि केसीले माग गर्नुभएको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार दोषी ठहर देखिएका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बर्खास्ती गर्न पनि उहाँले बताउनु भएको छ । दोस्रो मागमा केसीले निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन माग गर्नुभएको छ । तेस्रो बुँदामा केसीले सरकारको निर्णयको उल्लंघन गरी काठमाडौं विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क तत्काल फिर्ता लिई दोषी पदाधिकारीमाथि कारबाही गर्न भन्नुभएको छ ।
नीलकण्ठ नगरपालिका–११ सिम्ले ज्यामरुङमा पास्नीको भोज खाएकामध्ये ३० जना भन्दाबढी बिरामी परेका छन् ।
गर्मीका कारण ज्वरो, झाडापखला, फुडपोइजनलगायतका रोगबाट ग्रसित भएका नारायणी अस्पतालका चिकित्सकले जनाएका छन् ।